Naukrigulf အလုပ်ရှာဖွေရေးရှာရန်အတွက် Naukri ပင်လယ်ကွေ့ Careers နှင့်အလုပ်အကိုင်🥇
Naukri ပင်လယ်ကွေ့ - Naukrigulf.com နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်
Naukri ပင်လယ်ကွေ့ကိုအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်ကိုတင်လိုက်တယ်။ ဘို့ နိုင်ငံတကာလုပ်ကိုင်ဖို့ရှာဖွေနေကြသူကလူ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ပေးပါ။ Naukrigulg ကိုအကောင်းဆုံးအလုပ် site ကိုသည်အဘယ်ကြောင့်ရှိပါသည်သင်တို့ရှိသမျှသည်အဖြေကိုရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်သင်၏ CV upload လုပ်ဖို့ကျိုးနပ်သည်။ သေချာသည်ငါတို့ကုမ္ပဏီရှေ့ဆက်ဖို့အကြံပေး။ ထိုသူတို့၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးဖြစ်လာသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့နက်ရှိုင်းသောသုတေသနပြုတော်မူပြီ။ ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားအတူ။ သူတို့သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်ပုံကိုကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေရန် အဖြစ်ကောင်းစွာအိန္ဒိယနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအဖြစ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဂျော့ - ယောဘရှာရန် - ယောဘ VACANCY
Naukrigulf.com အိန္ဒိယအလုပ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အိန္ဒိယအတွက် operating စကားပြောခြင်း။ ထိုသို့ကျော်ကြားသူတွေကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, Naukri က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအာရှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူ၏နာမကိုအမှီ Sanjeev Bikhchandani ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတစ်ဦးအိန္ဒိယတွင်မဲပေးမြင့်မားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပြီး အိန္ဒိယအတွက်ဒီအလုပ် site ကိုစတင် 1995 ၌တည်၏။ ထိုအချိန်မှစ. ဝက်ဘ်ဆိုက်စူပါလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ အိန္ဒိယကလူနိုင်ငံတကာတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေ start ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဓိကစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်, ကြီးထွားလာ၏အလငျး၌, Naukri.com 2010 မှတက် 2018 စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ နယူး CV ကိုရဲ့အလုပ် site ကိုမှစီးဆင်းကိုစတင်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီ website မှာအကြောင်းကို 49.5 သန်းမှတ်ပုံတင်အလုပ်ရှာဖွေသူများရှိပါတယ်။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, ၎င်းတို့အားလုံးကိုအိန္ဒိယမှလာကြ၏။ ဒီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း site ကိုဆိုသောကွောငျ့ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အလုပ်အကိုင်များကြော်ငြာအားမရ။ ဒါ့အပြင်ဒီအလုပ်အကိုင်များ site ကိုနေတုန်းပဲကြီးထွားလာကြောင်း, အောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ မကြာခင်ပဲ, ဒီကုမ္ပဏီန်းကျင် 1 သန်းအသုံးပြုသူများကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ တကမ္ဘာလုံးလစဉ်လတိုင်း ကူညီခြင်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိပျမ်းမျှ 50,000 အလုပ်ရှာဖွေသူများ CV ကိုအပ်လုဒ်တင်ခြင်း။ 11,000 အကြောင်းကိုအခြားတစ်ဖက်တွင်ယင်း၏ဖန်တီးခဲ့အတွင်းပိုင်းပြန်တယ်။ နေ့တိုင်းအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများလာရောက်ပူးပေါင်း။ 130,000 ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ထက်ပိုပြီးနေ့စဉ်ဆက်ပြောသည်နေကြသည်။ နှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူ CVS လွှတ်တင်စဉ်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအခြားသူများကိုကူညီခြင်း။ ဝီကီပီးဒီးယားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ 5000 န်ထမ်းထက်ဝန်ထမ်းကပိုကြောင်းဟု။ ဤသည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း site ကိုအိန္ဒိယအတွက်အလွန်အနည်းငယ်အမြတ်အစွန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုကျော်စီမံခန့်ခွဲသန့်စင်သော, စကားပြော။ နှင့်ကုမ္ပဏီများအတွင်းကြီးထွားလာအမြန်ဆုံး၏တဦးတည်း။ သေချာသည် ထိုကဲ့သို့သောအိန္ဒိယနှင့်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအဖြစ်နိုင်ငံအတွင်း.
အဘယ်ကြောင့် Naukri ပင်လယ်ကွေ့ No.1 ယောဘသည်ဆိုက်ကိုပါသလဲ
ရိုးရှင်းစွာအဘာလို့လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအထူးဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဒီအကုမ္ပဏီဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ပါတယ် ?. ဒါကြောင့်အင်တာနက်ကိုကျော်ရှည်လျားသောပုံပြင်ရှိခြင်းကြောင့်။ လူတွေအများအပြားသူတို့ကိုသုံးပြီးထားပြီး အင်တာဗျူးအတွက်လမ်းလျှောက်ရဖို့။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးထက်ပို 99% ။ ဒီအလုပ်ဆိုက်နှင့်ပရိုဖိုင်းပြီးသွား။ ခိုင်မာတဲ့လူမှုမီဒီယာရှေ့မှောက်တွင်။ ထို့အပြင်အားလုံးကို Google နှင့် Facebook ကျော်သစ်ကိုနေရာလွတ်တွေအများကြီး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဤမျှလောက်များစွာသောကြီးမားသောကုမ္ပဏီကြီးပို့စ်တင် ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်.
စိတ်ထဲ၌ဤအတူဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ, ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပေး။ NaukriGulf နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ပါ။ အဲဒါကိုရကျိုးနပ်သည်လို့ပဲ။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်။ ထို့အပြင်, သင်သည် Google သွားရောက်ကြည့်ရှုသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီလွယ်ကူစွာအွန်လိုင်းအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီနှင့်တူပုံရသည်။ ဒီကုမ္ပဏီ 1995 အတွက် operating စတင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမထိတ်လန့်ရှိပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. ကြီးမားသောရာထူးအွန်လိုင်းစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။
သငျသညျ Naukri အလုပ်ရှာဖွေရေးအိန္ဒိယသွားရောက်ကြည့်ရှုပါသလား?
Naukri ပင်လယ်ကွေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အွန်လိုင်းကျွောငွာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စုဆောင်းမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသေချာတဦးတည်းသည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထိပ်တန်းဖောက်သည်န်ဆောင်မှုများပေး။ ယခုအချိန်တွင်အလုပ် site ကို 51,000 ကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်န်းကျင်ရှိပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားအရသိရသည်။ ထို ငှားရမ်းအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများအပါအဝင်။ နှင့်အညီ, ဒေတာဘေ့စ access ကိုနဲ့တူန်ဆောင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ရှင်များအကြား site ပေါ်တွင်ကြော်ငြာခြင်း / စာရင်း Naukri.com ပေးဆောင်သူတို့ကိုအများကြီး။
သင်ဤအလုပ်ပေါ်တယ်ကြောင်းသိသလား အိန္ဒိယတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အင်ဒီးယန်းအလုပ်ရှာဖွေသူများအလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ ဒီအလုပ်ဆိုက်နှင့်။ လုံးဝဒီအလုပ် site ကိုချစ်ကြတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအကအခမဲ့အဘို့ဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား, ထိုအခါတပြင်လုံးကိုကုမ္ပဏီ။ 1995 အတွက် operated စတင်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရဖို့ကယ့်ကိုထိုက်တန်သည်။ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ဤကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီအရွယ်အစားအမြဲ legit ဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီကုမ္ပဏီ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအိန္ဒိယကနေအိပ်မက်နေရာလွတ်ရှာတွေ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအိန္ဒိယဝက်ဘ်ဆိုက်၏တစိတ်တပိုင်းစိတ်ကိုအလည်အပတ်၌ဤအတူ။ Naukri အဖြစ်အလုပ် site ကိုသူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှာအလွန်ကောင်းလှ၏။ နှင့်ဤအတူစိတ်တွင်, အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေ။ သေချာများအတွက်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်လာသည်။
ဒေလီနှင့်ချင်နိုင်းအတွက် Naukri အလုပ်ရှာဖွေရေး?
ဒီကုမ္ပဏီအာရုံ၏နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအိန္ဒိယဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ဒေလီစီးတီးနှင့်ချင်နိုင်း။ အိန္ဒိယတွင်အလုပ်ရှာနေသူတစ်ဦးကလူအဖြစ်။ ကျိန်းသေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်မှာသူတို့ထံမှ၎င်းတို့၏အိန္ဒိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ် ဗီဇာအကူအညီပေး။ အိန္ဒိယအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်တစ်ခုကြီးမားအရေအတွက်ကိုရှိပါသည်။ ထိုအသေချာအဘို့ထိုသူတို့တစ်တွေအများကြီးဒေလီ၌ရှိကြ၏။ ဒါဟာသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စစ်ဆေး wort ဖြစ်ပါတယ်။ updated အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များကိုအခွင့်အလမ်းအနေဖြင့်။ ချင်နိုင်းအတွက် Naukri အလုပ်အကိုင်များ posted နေ့တိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒီတော့အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေသူအဖြစ်ကိုအောက်မေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို ဒီအလုပ်ပေါ်တယ်တိုးတက်မှုကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လောက်သိတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပြည်ပမှာအလုပ်ရှာဖွေတာ။ အထူးသဖြင့်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်။ NaukriGulf အတူ။
က 100% အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲ။ ထိုမှတပါး, မည်သူမဆိုအဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Naukri ပင်လယ်ကွေ့ Careers, ရလဒ်အဖြစ်မြင့်မားအဆင့်ရရှိခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းထံမှပြန် ကူညီခြင်းအမှုဆောင်အရာရှိ။ လူအပေါငျးတို့ကသူတို့ကိုရန် CV ကိုပေးပို့ခြင်းကမ္ဘာလုံးကျော်ကနေလူတွေ။ ထိုအခြေအနေများ, Naukri ပင်လယ်ကွေ့ Careers ။ စူပါကောင်းစွာသွားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်လာသည်။ Naukrigulf နှင့်အတူအသစ်လုပ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာရှာဖွေခြင်း။ ဒါကကုမ္ပဏီဒေတာဘေ့စကြီးမားသည်။ နေရာလွတ်တွေအများကြီးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိပ်တန်း 500 Forbes မဂ္ဂဇင်းအလုပ်ရှင်များကနေစကားပြော။ အထိ ထိုကဲ့သို့သော Dubai Mall အဖြစ်ဒေသခံအရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှု။ အထက်ပြထားတဲ့အတိုင်းနှင့်အညီ, CV ကိုရနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ သူတို့ရဲ့စုဆောင်းဖို့ Upload လုပ်ပါ။ ထိုအခါရေရှည်မှာအတွက်ပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပါ။
ဒီတော့ရန်ကြိုးစား ပင်လယ်ကွေ့ဧရိယာအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့။ ထိုမှတပါး, ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုဖမ်းပြီး။ အဖြစ်မှန်အတွက်ပင်လယ်ကွေ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အဘယ်သူမျှမပိုကောင်းရာအရပျရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါ Naukri ကိုအကောင်းဆုံးအကြားသေချာသည်။ ထိုအခါသူတို့ကိုပေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ နာမည်ကြီးသူမြား၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload ။ အင်တာနက်စကားလုံးတစ်လုံးအတွက်လျှောက်လွှာပေးပို့သည်။ ထိုအခါအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဘို့, အင်တာဗျူးအဘို့ပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်။ ဒီအလုပ် Finder ၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် နိုင်ငံတကာဒူဘိုင်းလေဆိပ်တွင်အလုပ်ခံရ။ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်စော်ဘွား။ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ကူဝိတ်အတူ။ အားလုံးပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ကျော်အဖြစ်မှန်ပါ။ ဒါ့အပြင်အာရေဗျပင်လယ်ကွေ့ဧရိယာအဖြစ်လူသိများ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းမဖြုန်းတီးပါနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်အလုပ်အတွက် ဒါမှမဟုတ်အဖြစ် ဒူဘိုင်းတစ်ဦးသူနာပြုအဖြစ်အလုပ်။ နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာသည်။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အ Naukrigulf မှလျှောက်ထားခြင်းအဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိပါသလဲ
အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်, သင်ဂျော့ဘ်များအတွက် Naukrigulf မှ Apply သငျ့သညျ။ Naukri.com ကိုခေါ်ဒီစုဆောင်းမှု site ၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စူပါဖြစ်လာ ယူအေအီးအတွက်လူကြိုက်များ်ထမ်းရှာဖွေသူ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီအုပ်ထိန်း site ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ No.1 ယောဘသည် site ကိုဖြစ်လာအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများအနှံ့ Naukrigulf အဖွင့် Explore ။
ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူသင်လုပ်နိုင်သည် မွန်ဘိုင်း၌ကောင်းသောအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုတကယ်ရှာတွေ့။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီသင်သည်အနည်းငယ်အကြံပေးချက်များရေးသားခြင်း။ သငျသညျအလုပ်ရှာဖွေစတင်ရန်ချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပါ။ အောက်တွင်သင်အများအပြားအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ Naukri ပင်လယ်ကွေ့ဒါပေမယ့်လည်း CareerJet နှင့်အခြားသူများမသာ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တတ်နိုင်သမျှ သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ဆင်းသက်ကူညီ။ ဒီတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကောင်းတစ်ဦးအကြံပေးရပါတယ်။ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ပါ။
Naukri ယောဘသည် site ကိုနိဂုံး
ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးအပြီးသတ်ကြပါစို့။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်။ အိန္ဒိယနှင့်ဒူဘိုင်းတို့အကြား။ ဤ အလုပ်အကိုင်အ site ကိုယူအေအီးအတွက်အလုပ်အတွက်ထိပ်တန်းကစားသမားများအကြားဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား, ကုမ္ပဏီနှင့်အတူပရိုဖိုင်းကိုအသုံးပြုမှုသည်။ အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများများအတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်။ အိန္ဒိယကနေအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှတက်အဖြစ်ဥရောပ။ ဒီအားလုံးအသစ်ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရာပူဇော်သက္ကာကိုနေရာ။ ထိုအ Naukrigulf ကျိန်းသေအကြံဥာဏ်-bits ပေးပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သင်သတင်းအချက်အလက်အများကြီးရနိုင်ကြသည်။ ဥပမာ အလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုအကြံပေးချက်များ။ ထိုမှတပါး, ဘယ်လိုပြည်ပမှာအလုပ်လျှောက်ထားရန်။ အများကြီးပိုမိုသောအချက်အလက်များ။ သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်အတော်လေးကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကောင်းသောကံလိုသော။ NaukriGulf သစ်သည်အသုံးပြုသူများရန်။ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Naukrigulf အတွက် Naukri ပင်လယ်ကွေ့ Careers နှင့်ဂျော့ဘ်။ တစ်ခုမှာ ကူဝိတ်အတွက်အလုပ်ရှာဖို့အကောင်းဆုံးက်ဘ်ဆိုက်အဖြစ်အိန္ဒိယနှင့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, Naukri.com ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကပိုထွက်ရှာတွေ့မှကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေသည်။ အထူးသဖြင့်ဤအလုပ် site ကိုအကြောင်းကို။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးကုအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့စာရေးနေကြသည်။ ထိုအမှု၌, ငါတို့အဖွဲ့ကယူအေအီးအတွက်အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဒီ website Extreme ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အထူးသဖြင့်, နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင်လူတစ်ဦးချင်းစီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်။ မျှော်လင့် အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထား.
Best Jobs Portals in Dubai, UAE Jobs in Dubai expats advice in UAE Jobs in Dubai expats help, find best jobs portals in Dubai, UAE. And jobs in Dubai expats detailed advice. Especially to reach top jobs portal sites in UAE. Asamatter of fact job sites in Dubai City. Playing the most important role in working and living in Dubai. For fresh and experienced job hunters. Although this may be true most of the expats. Are searching for jobs additionally from their own countries. Identically every job seeker needs to be placed inaprofessional working environment. The only questions are Dubai good for you?. On the other hand, to getajob in Dubai City. With the high paying wages. You need to work super hard. And using advanced technology for jobs searching. For example, contact directly recruitment agents in Dubai. On the positive side, in the UAE. You can still [ ... ]